Flash mob Protest_Yangon (June 3/2021) – PVTV Myanmar
KNU ၊ KNPP ၊ CNF တို့ပူးပေါင်းပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံပြီး ထပ်မံဖြည့်သွင်းရန် အချက်များကို ထုတ်ပြန်
ကလေး-တမူး အာရှလမ်းမကို ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ကစပြီး ည ၆ နာရီ နောက်ပိုင်း အပြင်မထွက်ဖို့ ထုတ်ပြန်
ဒီတပတ် တော်လှန်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍမှာတော့ “စကစ၏ မိုဘိုင်းဒေတာသုံးစွဲမှုကန့်သတ်ရန် ကြိုးစားခြင်း” ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Radio NUG – Jan 17th, 2022 Morning
Radio NUG – Jan 16th, 2022 Morning
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ သူတွေကိုပါ လူသားဒိုင်းလုပ်နေ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်တွေက ပြည်သူချင်း ခွဲခြားမှု မပြုလုပ်ဘဲ လူသားဒိုင်းပါလာရင် တိုက်ခိုက်မှု မလုပ်ဟု ဗိုလ်နဂါးပြော
Flash mob Protest_Yangon (June 3/2021)
Spring Revolution Memorials
· 8 months ago ·5 Comments
U Kyaw Moe Tun Hero of Spring Revolution (True Story)
Thida Soe says:
2021-06-03 at 5:45 PM
zaw myo says:
2021-06-03 at 7:02 PM
အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရမွာ ေဆြးေႏြးစရာ မလိုဘူး အေလ်ာ့ေပးဖို႔လဲ မလိုဘူး
sai sai says:
2021-06-03 at 8:33 PM
ပူးေပါင္းေပးျကပါ ေရာက္တ့ဲေနရာကေနအခုလိုပူးေပါင္းေပးျကပါ စစ္ေခြးကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႕pdf ကေရွ႕ကျကိဳးစားေနရင္ ေနာက္ကျပည္သူေတြကလည္း ကိုယ္တက္နိုင္တ့ဲ သပိတ္ေတြမွာအားတက္သေရာပါဝင္ေပးျကပါ ျပည္သူတေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕အင္အားကအေရးပါပါတယ္ အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္ တိုင္းကျပည္သူတိုင္းပါဝင္ေပးျကပါ ဒါမွသာစစ္ေခြးဆိုတာ ေနာင္သမိုင္းမရွိေတာ့မွာပါ
Sai Nay says:
2021-06-04 at 12:11 AM
လမ်းမှာခွေးလေခွေးလွင့်တွေကို စည်ပင်ကလိုက်ဖမ်းနေသလိုပဲ ပြေးလွှားနေကြာတာ..သနားစရာ.
နီပိန်း ခွေး Z တွေ….
Khin Yee says:
2021-06-04 at 10:55 AM
ချီးစားပြီးကြီးလာတဲ့သူတွေ ကောမန့် မမန့်ရ။ လူလိုအသိရှိမှ ကောမန့်ဝင်ရေးပါ။ ပထွေးကချကျွေးတဲ့အရိုးကိုက်က အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုဘယ်နားလည်မလည်း။
Burmese Associated Press ရဲ့ “ဆူးထက်ထက် ရဲရင့်နှင်းဆီများ” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
"တော်လှန်ရေးက ကြာမယ်" လို့ ပညာရှင်အများစုနှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ အတော်များများက သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ စကစ ဟာ...
ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးပြားတွေကို မန္တလေး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက မီးရှို့ဖျက်ဆီး
လမ်း လျှောက် သူ
တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အကြား အချိတ်ဆက်ပိုမိလာနေပြီလို့ ဗိုလ်နဂါးပြော
Aung Zay Latt
Saung Hey Wah
Hi Mg Kaung
“ကျွန်တော် ဆက်တွေးဖြစ်သော …” (အက်ဆေး)…
What I Think On (June 3/2021)